Shirweynaha Kismaayo oo dib u furmayo iyo Ergooyinkii ka maqnaa oo la soo dhameystiray – idalenews.com
Shirweynaha Kismaayo ee maamul u sameynta Jubooyinka iyo Gedo ayaa lagu wadaa in dib loo furo, kadib markii uu fashilmay wada hadaladii u dhaxeeyay dowladda Soomaaliya iyo Maamulayaasha Kismaayo.
Sida ay sheegayaan wararka ergooyinkii ka maqnaa shirka ee laga sugayay Gobolka Gedo ayaa shalay soo gaaray magaalada, iyadoo ay soo dhameystirmeen dhamaan ergooyinkii ka kala socday deegaanada jubooyinka iyo Gedo.
Maamulka KMG ee Kismaayo ayaa taageero ka raadinaya odayaasha dhaqanka deegaanka, si ay shirka ugu socodsiiyaan, isla markaana maalmaha soo socda loo guda galo ajandayaasha, isla markaana lagu dhiso maamul goboleedka Jubbaland.
Wararka laga helayo Kismaayo ayaa sheegaya in Gudiga qaban qaabada ee shirweynaha uu ku howlan yahay diyaarinta shirka iyo sidii loo ambaqaadi lahaa, waxaana qorshuhu yahay in shirka socdo muddo saddex todobaad, kadibna go’aan laga soo saaro.
Madasha ayaa waxaa ku sugan xubno aqoonyahano, siyaasiyiin caan ah iyo dad ka yimid qurbaha, waxaana Maamulayaasha Kismaayo doonayaan in hadii aysan dowladda ka soo qeyb gelin uu shirkan noqdo mid aayaha jubooyinka iyo Gedo kaga wada tashadaan dadka deegaanka, maamulna ku sameystaan.
Xukuumada Soomaaliya ayaa sheegtay in shirka Kismaayo wixii ka soo baxa aan loo aqoonsan doonin wax maamul goboleed ah, maadaama markii hore aan shirkaas ka soo bixin shuruudihii looga baahnaa, isla markaana kaalintii dowladda aanay ka muuqan.